Magaladda cadaado oo noqotau xarunta somalida kala mabda ah meelay isku arkaan laguna wada hadalsiiyo. | warsugansomaliya.wordpress.com
Dagmadda cadaado kana tirsan gobolka Gal-gaduud ayaa waxaa xiligaan ay xarun u tahay maamulka Ximin iyo Xeeb, waana magaalo la oran karo waxaa ay kulansatay dad Aaney Soomaaliya Suura gal aheyn inay is arkaan.
Cadaado ayaa waxaa ay hoy u tahay hogaamiyaal Sare oo ka tirsan Al-Shabab oo heyb ahaan halkaa ka soo jeedo, sidoo kale waxaa halkaa degen Masuuliyiin maamulka Ahlusuna ka tirsan iyo Maamulka Ximin iyo Xeeb, Horjoogayasha ugu Tunka weyn Kooxa magacooda loogu yeero Burcad
Madaxweyne ku xigeenka maamulka Ximin iyo Xeeeb Korneel C/ Maxamed Axmed ayaa waxa uu sheegay in xeer wada noolaasho uu ka jiro Cadaado kaasi oo uu sheegay in uusan qabaneyn dad uu tusaale uga soo qaatay Xasan Daahir Aweys.
Sidoo kale Madaxweyne ku xigeenka ayaa sheegay in wada noolaasho ay ka jirto Deegaanada maamulka Ximin iyo xeeb gaar ahaan xarunta maamulkaas ee Cadaado.
Sheekh C/risaaq Maxamed Cali Mire “Ashcari” oo ah U hadle Maamulka Ahlusuna ayaa sheegay in maamulka Ximin iyo Xeeb uu yahay maamul eedeysane ah soona dhaweeyay Nin Dabiile gacan ku dhiigle ah sida uu hadalka uu u dhigaye, sheegayna in lala xisaabtami doono.
Warar soo baxayay ayaa sheegayey in Ahlusuna ay weerar ku tahay Deeganada Maamulka Ximin iyo Xeeb gaar ahan Cadaado oo xiligaan uu ku sugan yahay Sheekh Xasan Daahir .
Madaxweyne ku xigeenka Maamulka Ximin iyo Xeeb C/ Maxamed Axmed ayaa sheegay in aysan dhici doonin in ay soo weeraraan Ahlusuna ayna yihiin maamul Xigaale ah.
Masuul ka tirsan Ximin iyo Xeeb oo Diiday in magaciisa iyo Codkiisa war-baahinta loo adeegsado ayaa Sheegay in in cadaado ay ku sugan yihiin dhicayada dalka intooda badan ee iska soo horjeeda.
Sidoo kale sargaalka ayaa sheegay in cadaado ay ku sugan ama xiliyada qaar ay tagaan Sheekh Xasan Afrax oo Shabab ka tirsan, Xasan Cali Gees iyo Masuuliyiin kale oo burcad badeeda iyo Ahlusuna ka tirsan.
Cadaado oo kulansatay dhinacyada dalka isku haya awood ahaa iyo siyaasad ahaan ayaa waxaa xusid mudan in aysan ka dhicin wax dagaal ah oo dhex mara dhinacyadas iska soo horjeedo ee ku sugan Cadaado oo u badan dad isku heyb ah balse kala Koox ah.
Q/ Sugulle mohamoud abdi
← Siyaasiyiinta iyo wax garadka besha habargidir oo olole ugu jirta sidii sifiican lola
War Deg Deg Ah Xasan Daahir oo mar kale Diiday in Muqdisho la keeno iyo labo katirsan Saraakiisha lasocota oo la xiray →